Akwụkwọ akụkọ agha kacha mma
Nyocha banyere akwụkwọ akụkọ agha
N'okpuru Igwe Ọcha, nke Mark Sullivan dere
N'ịhụnanya na n'agha ihe niile kwere. Ka anyị ghara ikwu ma ọ bụrụ na ogige abụọ ahụ agbakọta ... Ọ bụ naanị ụdị ụzọ a ma nwetakwa site na ezigbo akụkọ nwere ike ịkwaga Mark T. Sullivan pụọ na ụdị ihe omimi na enweghị obi abụọ nke ya na ya na -eme njem ...
Eagles nọ n'oké ifufe, nke Ben Kane dere
Usoro Eagles nke Rome na -ejedebe nkeji nke atọ a. Onye ode akwụkwọ Kenya Ben Kane si otu a mechie akụkọ ọhụrụ ya gbasara akụkọ gbasara akụkọ gbasara agha. Oge dị anya agbachitere ókèala ma ọ bụ merie akara nke ọbara site na ... ...
1982, nke Sergio Olguín dere
Ịkwụsị na nguzobe adịghị mfe. Ime ya n'ihe gbasara atụmatụ ezinụlọ dị ọbụna karịa. Pedro kpọrọ ọrụ agha asị, nke ndị nna nna ya so. Mgbe ọ dị afọ iri abụọ, nwata nwoke ahụ na -echekarị echiche, wee họrọ sayensị ...
Ụlọ nke mkpụrụ okwu, nke Jussi Adler Olsen dere
N'iji ihe agha dị ka agha, onye dere akwụkwọ akụkọ a na -ewetara anyị akụkọ pụrụ iche, nke dị nso na ụdị nke onye dere ya, wee wepụta ya site na aha dị iche iche ebe mbụ e bipụtara ya na 1997. Nkata a na -ekwu maka ya na -agba gburugburu ụgbọ elu nke ndị ọkwọ ụgbọ elu abụọ nke Bekee. n'ime ...
Ihu ya n'oge, nke Alejandro Parisi dere
N'oge ọzọ, ekwurula m okwu banyere ịhụnanya na -enweghị ike ịkọwa, ọkachasị maka nyocha nke Akwụkwọ Ilu, nke Olov Enquist dere. N'ọnọdụ a, anyị na -ahụkwa oke ịhụnanya nke amachibidoro eburu oke nke omume na eke, dịka enyere anyị ka anyị ghọta. ...
Ọkọlọtọ n'igirigi, nke Javier Reverte dere
Agha anyị. A ka na -echere omume nchegharị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na edemede. Agha obodo bufere akwụkwọ Spanish ugboro ugboro. Ọ naghịkwa ewute echiche ọhụrụ, ụzọ dị iche. Ọkọlọtọ n'igwe ojii bụ na, akụkọ gbasara agha obodo ...